Kedu ihe bụ CTR Mobile na Desktọpụ Ngosipụta Ngosipụta? | Martech Zone
Maka onye na-ere ahịa, mgbasa ozi akwụ ụgwọ na-abụkarị ihe a pụrụ ịdabere na ya nke nnweta ndị ahịa. Ọ bụ ezie na ụzọ ụlọ ọrụ si eji mgbasa ozi akwụ ụgwọ nwere ike ịdị iche - ụfọdụ na-eji mgbasa ozi maka iweghachi, ụfọdụ maka mmata aha, na ụfọdụ iji nweta onwe ya - onye ọ bụla n'ime anyị ga-etinye aka na ya n'ụzọ ụfọdụ.
Na, n'ihi ikpu ìsì / ad ìsì, ọ dịghị mfe ijide uche nke ndị ọrụ na mgbasa ozi ngosi wee mee ka ha mee ihe achọrọ. Nke a pụtara, n'otu aka, ị ga-anwale ọtụtụ ihe iji chọpụta ihe na-adabara ndị na-ege gị ntị. N'aka nke ozo, ikwesiri ileba anya na ROAS (Laghachite na Ad Spend). ROAS nwere ike ịgbapụ ma ọ bụrụ na ịnwale oke. Iji maa atụ, cheedị imefu ezigbo ego iji mezie otu n’ime ọtụtụ mgbanwe na egwuregwu (izi ozi, imewe, wdg).
Karịsịa, na nsogbu ahụ, ọ dị mkpa ịghọta otu ị ga-esi bulite nloghachi ka ị na-emefu mgbasa ozi na ọkwa kachasị mma. Na post a, anyị ga - enyere gị aka ịhọrọ nha ad ziri ezi dabere na ebumnuche mkpọsa gị. Withga nha ọkwa kachasị mma nwere ike meziwanye ngosipụta nke mgbasa ozi gị, CTR, ma si otú ahụ, ọnụego mgbanwe. Ka anyị banye n'ime.
Na Automatad, anyị mụọ ihe kariri ijeri abuo nke ngosi ngosi mgbasa ozi sitere na otutu ndi nkwusa web ka ichota oke nke mgbasa ozi (na%), ihe o na-efu iji zuta ha, kedu ihe CTR, na ndi ozo. Site na data ndị a, anyị ga-enwe ike ịchọpụta ogo mgbasa ozi kachasị mma iji dabere na ebumnuche gị.
Maka mgbasa ozi ịmara ụdị, ịkwesịrị ịbịakwute ndị ọrụ. Ka ị na-erute, ihe ka mma ga-arụpụta. Yabụ ịkwesịrị ijide n'aka na ndị okike gị dị nha na-achọkarị.
Ngwa Kachasị Mgbasa Ozi Kachasị Mma - Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ mobile adamba na usoro dị, naanị nha ọkwa mgbasa ozi maka ọtụtụ mgbasa ozi mgbasa ozi na ngwaọrụ mkpanaka - 320 × 50 na 300 × 250. 320 × 50, makwaara dị ka, mobile leaderboard naanị captures ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke ngosi ngosi niile nyefere site na ekwentị. Na 300 × 250 ma ọ bụ ọkara rectangle na-enweta ~ 40 percent. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, site n'ilekwasị anya na naanị otu ma ọ bụ abụọ mgbasa ozi mgbasa ozi, ị ga-enwe ike iru ọtụtụ mmadụ na weebụ.
Ad Size (nyefee) % nke Onu Ego
Best Desktop Ad Nha - Mgbe ọ na-abịa na desktọọpụ, ịkwesịrị iji nnukwu ihe okike. Dịka ọmụmaatụ, 728 × 90 (desktọọpụ desktọọpụ) na-ejide ọnụ ọgụgụ kachasị elu. Vetikal ad unit 160 × 600 na-esote ya. Dị ka ma desktọọpụ desktọọpụ na ogwe osisi mgbasa ozi nwere ihu ọma dị elu, ọ kachasị mma iji ha maka mkpọsa mmata nke ọma.
Ọrụ Mgbasa Ozi formanrụ Ọrụ
N'aka nke ọzọ, mkpọsa arụmọrụ na-achọ iji nweta ọtụtụ mgbanwe dị ka o kwere mee. Ma ọ bụ ntinye aka email, ntinye ngwa, ma ọ bụ ntinye ụdị kọntaktị, ị na-achọkarị ịkwalite maka mgbanwe. Yabụ, na nke a, ọ kachasị mma iji nha na CTR dị elu maka ihe okike gị.
Ngwa Kachasị Mgbasa Ozi Kachasị Mma - Dika anyi huru na otutu otutu ihe omuma a na - ejide site na nha mgbasa ozi abuo, o kacha mma ka ha soro ha. Ọ bụ ezie na e nwere ọkwa mgbasa ozi ndị ọzọ nwere CTR ka mma - 336 × 280, dịka ọmụmaatụ - ọtụtụ weebụsaịtị na-ezere ụdị nkeji ndị dị otu a ka ọ nwere ike mebie ahụmịhe onye ọrụ. Yabụ, ị gaghị enwe ike iwepụta ọtụtụ echiche dị ka atụmatụ ahụ si dị.
Best Desktop Ad Nha - Mgbe ọ na-abịa na desktọọpụ, ị nwere karịa mgbasa nha ịnwale. Mana ọ ka mma iji nha nwere CTR dị elu yana ọchịchọ zuru oke (saịtị ndị ọzọ na-anabata nha). Ya mere, 300 × 600 kachasị mma ma ọ bụrụ na anyị na-atụle ma CTR na ọchịchọ. Ihe ọzọ kachasị mma bụ, 160 × 600. Ọ bụrụ n’ịchọghị irufe ibu, ị nwere ike ịga na 970 × 250 n’ihi na ọ nwere CTR kachasị elu na desktọọpụ.
Budata Mmụta Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi zuru ezu
Tags: akpakactrdesktọọpụ nhamelite ctrnha ngbasa ozi ekwentiarụmọrụ arụmọrụ